ပွညျသူ့လှတျတျော – Yangon Hluttaw
Home / ပွညျသူ့လှတျတျော
January 30, 2018	ပွညျသူ့လှတျတျော 190
၁။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် Website ကို ပိုမိုပြည့်စုံသော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ ယခုအခါတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် Website အသစ်အား ပိုမိုပြည့်စုံသော သတင်းအချက်အလက် များဖြင့် www.pyithu.hluttaw.mm လိပ်စာတွင် လွှင့်တင်ထား ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် Website ၏ Home Page တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်ရက်များ၌ အစည်းအဝေး ကျင်းပပုံများအား တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် တင်ဆက်ခြင်းနှင့် ဝန်ကြီးဌာန များအလိုက် မေးခွန်းနှင့်ဖြေကြားချက်များကို စုစည်းကြည့်ရှုနိုင်ရန် လည်းကောင်း၊ အစည်းအဝေးကဏ္ဍတွင် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ စတင်၍ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ ကျင်းပခဲ့သော အစည်းအဝေးအကြိမ်များ အလိုက် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ၊ …
January 30, 2018	ပွညျသူ့လှတျတျော 20
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁၉ ရက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ထိုင်း-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရအချင်းချင်း၊ လွှတ်တော်အချင်းချင်း၊ ပြည်သူအချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အတူ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးမှ …
January 11, 2018	ပွညျသူ့လှတျတျော 5
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁၁ ရက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဘဏ်များနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင် သည် Anhui Provincial State-owned Assets supervision and Administration commission and the Provincial Enterprises မှ DONG YA QING ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရ်ီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ရေးရာဆောင်အမှတ် (I-7) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်သွားမည့် အစီအစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး …
May 30, 2017	ပွညျသူ့လှတျတျော, အမြိုးသားလှတျတျော 37
May 30, 2017	ပွညျသူ့လှတျတျော, အမြိုးသားလှတျတျော 16
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း သည် လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ ဆွီဒင်သံအမတ်ကြီး H.E Ms. Annika Mariana Elisabet Rachel Ben David နှင့် အဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရေးရာဆောင်အမှတ် (I-11) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် လူ့အခွင့်အရေးအထောက်အကူပြု ဥပဒေများရေးဆွဲနေမှု အခြေအနေများ၊ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအပေါ် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးကြသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ဆွီဒင်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ …
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် ဥရောပပါလီမန်၊ အရှေ့တောင်အာရှနှင့် အာဆီယံဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
May 30, 2017	ပွညျသူ့လှတျတျော, အမြိုးသားလှတျတျော 10
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်‌ သည် ဥရောပပါလီမန်၊ စီးပွားရေးနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Mr. Werner LANGEN ဦးဆောင်သော ဥရောပပါလီမန်၊ အရှေ့တောင်အာရှနှင့် အာဆီယံဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။ တွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အတူ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ဧည့်သည်တော်အဖွဲ့နှင့်‌အတူ ဥရောပသမဂ္ဂ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Roland Kobia လည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံစဉ် ဥရောပပါလီမန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့်‌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ …
May 29, 2017	ပွညျသူ့လှတျတျော, အမြိုးသားလှတျတျော 747
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်မိုးနိုင် သည် The World Bank Group မှ Mr. Sunil Kumar Khosla ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ရေးရာဆောင်အမှတ် (I-8) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။ တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း လျှပ်စစ်မီးလုံလောက်စွာရရှိရေးမှာ အဓိကအချက် ဖြစ်သည့်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုးချဲ့ထုတ်ယူမည့်ကိစ္စရပ်များ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေးအတွက် လိုအပ်သည့် ဓါတ်တိုင်များ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများရရှိနိုင်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်မီး မရရှိသေးသည့် ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများတွင် လျှပ်စစ်မီးမရရှိခင်ကာလအတွင်း အိမ်သုံးဆိုလာစနစ် တပ်ဆင်နိုင်ရေးတို့နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး …